जब करिनाले भनिन्, दीपिका र कैट्रीनासंग एउटै लिफ्टमा बस्नु भन्दा मर्नु जाती - dautarimedia.com
जब करिनाले भनिन्, दीपिका र कैट्रीनासंग एउटै लिफ्टमा बस्नु भन्दा मर्नु जाती
एजेन्सी । करिना कपुर बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छिन् । खासगरी उनी आफ्नो ब्यक्तिगत जीवनका कुराले विवादमा परिरहन्छिन् । तर लाग्छ उनलाई यस्ता कुराले कुनै फरक पार्दैन । अहिले उनी आफ्नो दोस्रो सन्तानको नाम र उनले सार्वजनिक गरेको एक कितावका कारण विवादमा छन् । तर कहिल्यै पनि उनले आफुले एक पटक दिएको अभिब्यक्ति कहिल्यै फिर्ता लिएकी छैनन् ।
जतिसुकै विरोधको सामना गर्नुपरे पनि उनी त्यसका लागि तयार हुन्छिन् । किनकी उनी निकै सोच बिचार गरेर मात्र बोल्छिन् । तर करिनाले सोचबिचार नगरी बोलेको केही कुराले भने उनी ट्रोल पनि बन्ने गरेकी छन् । एक पटक त्यस्तै भएको छ । करिनालाई फिल्म निर्माता करण जोहरले बीबीसी भन्छन् । किनकी उनीसंग सबै कलाकारहरुको बारेमा जानकारी हुन्छ । कतिपय मिडियाले उनले दिएको सूचनालाई नै समाचार समेत बनाउने गरेको करणले सार्वजनिक अभिब्यक्तिका क्रममा भन्ने गरेका छन् ।
करिनाले धेरै पटक कयौं कलाकारबारे टिप्पणी गरेकी छन् र तिनले बलिउडमा हलचल पैदा गरेको थियो। उनले एक पटक अभिनेत्री दीपिका पादूकोण र कट्रिना कैफबारे यस्तै टिप्पणी दिएकी थिइन्।
करिना र अभिनेता रणवीर कपुरको निकट सम्बन्ध छ। यी दिदीभाइलाई बलिउडमा अरुको कुरा धेरै गर्ने भनेर चिनिन्छ । किनकी सबै कलाकारका बारेमा यिनीहरुलाई जानकारी हुन्छ । तर जब रणवीरको नाम दीपिका र कट्रिनासँग जोडिएको थियो, उनी सबैका लागि मुख्य विषय बनेका थिए। रणवीरले दीपिकासँग प्रेममा रहँदै कट्रिनासँग प्रेम गर्न थालेपछि निकै चर्चा । विवाद भएको थियो ।
रणवीर, दीपिका र कट्रिनाको विषय चर्चामा रहँदाको समयतिरै ‘कफी विथ करण’ कार्यक्रममा करण जोहरले करिनालाई ‘दीपिका र कट्रिनासँगै लिफ्टमा अ ड्कि एको भए के गर्थ्यौ ? ’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। यसको जवाफमा करिनाले भनेकी थिइन्, ‘यदि त्यस्तो भयो भने मलाई लाग्छ म आफूलाई मा र्छु। दीपिका र कट्रिनासँग बस्नुभन्दा म र्नु जाती।’
Previous: चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको भयो डिभोर्स, लाइभमा आएर पूर्वपति विवेकले किन यस्तो भने? हेर्नुहोस् भिडियो
Next: बस्तीमै स्वास्थ्य शिविर पुगेपछि राउटे बस्तीमा छायो खुशीयाली